Taphoonni waancaa kubbaa miilaa Aafrikaa (CAF) 30ffaan har’a Ekuwaatooriyaal Giinii keessatti eegala - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Taphoonni waancaa kubbaa miilaa Aafrikaa (CAF) 30ffaan har’a Ekuwaatooriyaal Giinii keessatti eegala
Woldorgommiin dirree Aafrikaa irratti, kubbaa milaan ol’aantummaa argachuuf, woggaa lamatti altokko geggeeffamu har’a eegala. Woldorgommii kana irratti kan hirmaatan biyyota 16 yoo ta’ani, woldorgommiin kunis hanga Gurraandhala saddeetitti itti fufa. Magaalonni woldorgommii keessatti geggeffamus Bataa, Ebeebiyiin, Malaboofi Mongomaa ta’uun beekameera.
Woldorgommiin waancaa Aafrikaa (CAF) kuni guyyaa har’aa kan eegalu taphoota lamaan. Taphni garee Ekuwaatooriyaal Giiniifi Koongoo jiddutti magaalaa Bataa keessatti geggeefamuu tapha isa jalqabaati. Wolmorkiin 2ffaa, sa’aa 3 booda achuma magaalaa Bataa keessatti, garee Burkiinaa Faasoofi Gaabon jiddutti godhama.
Garee A: Burkinaa Faasoa, Koongoo, Ekuwaatooriyaal Giinii, Gaaboon
Garee B: Zaambiyaa, RD Koongoo, Tuniisiyaa, Keppe Verdee
Garee C: Senegaal, Aafrikaa Kibbaa, Gaanaa, Aljeeriyaa
Garee D: Ayvorii Koost, Giinii, Maalii, Kaameruun
Geeba 30ffaa kana eenyutu injifata, injifannoo harkatti galfata wonti jedhu baay’innaan irratti mariatamaara. Gareen heddu hiree injifachuu qabu, isa jedhu irratti taajjabdoonni heddu woliigu. Ta’us garuu, biyyoonni dandeettii gareefi dhuunfaan, akkasumas qabxiifi injifannoo hanga waancaa kanaaf dhihaatanitti godhaa turan irratti hundaayuudhaan maqaan isaanii adda durummaan ka’u jiru.
Gareeleen kaaba Aafrikaa irraa dhufan hiree guddaa qabu. Sa’aa kanatti gareen Aljeeriyaa sadarkaadhaan Aafrikaa keessatti tokkoffaadha. Kuni waan nutti himu heddu qaba. Keessumattuu taphni kuni akka dura karoorfametti, Morokkoo keessatti geggefame osoo ta’ee gareen Aljeeriyaa carraa waancaa kana fudhachuu bal’aa qaba ture. Gareen Tuniisiyaas, kan takkaa osoo hinmoo’atamin CAF 30ffaaf gaye hiree geeba kana harkatti galfachuu bal’aa qaba. Gareelee kaaba Aafrikaa irraa dhufan kanaaf danqaan guddichi isaaniifi geeba CAF 30ffaa moo’achuu jidduu jiru qilleensa Jiddu Galeessa Aafrikaa, oo’aafi jiidha hedddu qabu, ta’uu isaati kan dubbatamu.
Gareeleen dhiha Aafrikaas, baay’innaafi humnaan qaban wolitti funaananiiti falmaa waancaaf gara Ekuwaatooriyaal Giinitti kan qajeelan. Gareen geeba baranaa irra ija isaa buuse kamuu, gareeelee Dhiha Aafrikaa kanniin akka Gaanaa, Giinii, Ayvoorii Koost, Maalii, Senegaaliifi Burkiinaa Faasoo moo’achuufi isaan irratti ol’aantummaa gonfachuu qaba. Gareen Gaanaa woldorgommii waancaa Aafrikaa lamaan dabran irratti 3ffaa taa’ee xumuruun isaa niyaadatama. Hedduun keenna, gareen Ayvoorii Koost, humna akkamii akka qabate, eenyuun fa’a akka ufkeessatti ammate quba qabna.
Tapha bara kanaa irratti wonti haarofni uumame yoo jiraate gareen bebbekamoon lama, Naayijeeriyaafi Masriin, qooda irraa fudhachuu dadhabuu isaaniiti.
Taphni waancaa Aafrikaa 30ffaan kuni Morokotti geggeeffama jedhameeti yaadamaafi qophiin barbaachisus xumuramaa kan ture. Fulbaana dabre, sodaan Iboolaa inni guutuu Aafrikaa sodaachise, Morokoon yaada woldorgommii kana keessummeessuu akka jijjiirtu isii taasise. Egaa kana booda biyyi Ekuwaatooriyaal Giiniin hiree geeba kana geggeessuu kan argatte.
Gama birootiin, ummanni biyyattii mootummaan Ekuwaatooriyaal Giinii mirga bilisaan yaada ufii ibsachuufi mirga pireesii hinkabaju, jechuudhaan jiraattonni biyyattii isteediyeemii taphoonni itti geggeeffaman akka lagataniif sochii godhaa jiru. Haalli kuni isa yaachise kan fakkaatu perezidaant Te’oodoro Obiyaang Ingu’emaan, tikeetii 40,000 ‘maallaqa isaatiin’ bitee kanniin tapha daawwachuu barbaadaniif akka raabsamu godheera.
Kanniin waancaan 30ffaa Aafrikaa irratti hirmaatan hundaaf hiree garii hawwina.
taphoota kubbaa miilaa aafrikaa 30ffaa
waancaa kubbaa kaachoo aafrikaa 30ffaa
Previous articleMootummaan Itoophiyaa lammiiwwan Britaaniyaa 3 hidhe, yakki goolii uumuuf yaaluu
Next articleTeeknolojiin Sinimaagraafii garaagarummaa fotoofi viidiyoo jidduu jiru dhiphisaara